Andramasina : Epicerie voatafika tamin’ny basy. Dimy lahy nitam-basy no nanafika ny toeram-pivarotana enta-madinika iray tetsy Andramasina, tao amin’ny fokontany Alarobia Vatosola. Amin’ny andro atoandro, latsaka kely ny amin’ny 11 ora, no tonga ireo ary nandroba. Nambanana basy ny tompon’ny tsena dia nasaina navoakany ny vola rehetra. Tsy izany ihany fa mbola nentina koa izay entana mora nobataina toa ny finday, ny solosaina ary ny fahana izay namidy tao amin’ilay toerana. Nenjehina hatrany anaty kizo rehetra tany ireo olon-dratsy saingy mbola tsy nisy tratra aloha hatreto.
Mpitsoa-ponenana : Tsy takona afenina intsony. Ankoatry ny fahitàna mivantana ireo olona eny amin’ny kartie maro eto An-drenivohitra, dia mbola nanaporofo ny fisian’ny mpitsoa-ponenana koa ny fanazavan’ny Ong iray izay misahana ny fikarakarana azy ireo ary vatsian’ny sehatra iraisam-pirenena vola aza. Na izany aza, dia tsy sahy nanaporofo hatreto ilay vondrona ny amin’ny misy teratany Syriana ao anatin’ireo mpitsoa-ponenana. Tsy eto Andrenivohitra ihany, fa eny amin’ny lalam-pirenena koa dia efa betsaka ireo ny manorim-ponenana eny rehetra eny. Mitady tsy ho voafehy intsony…
Sambava : Nisy nivarotra ny trondro nifangaro tamin’ny faty. Nisavorovoro ny olona tao Sambava izay nihinana trondro novidina teny an-tsena, omaly. Ny antony, dia satria nifangaro tamin’ny razana iray izay tao anaty harato ireo hazan-drano ireo. Efa nisy ny fandraràn’ny mpitandro ny filaminana ny mba hanariana avy hatrany ireo trondro. Saingy mbola nisy nivarotra ihany izany ary tsy taiza fa teny an-tsena mihitsy. Tezitra mafy ny olona izay nanjifa ka tsy nahalala ny zava-nitranga ary nilaza ny hivondrona dia hitory. Raha tsiahivna dia tamin’ny alatsinainy teo no nahitàna io razana io, mpivaro-mandeha avy aty Andrenivohitra izy io ary nipetraka tao Sambava noho ny asa aman-draharahany.
Vonjy aina-Hopitaly : Mitombo hatrany ny fitarainana. Omaly dia nisy ny fitarainana nataon’ny olona izay nanaraka marary mafy teny amin’ny sampana vonjy aina an’ny hopitalim-bahoaka iray eto Andrenivohitra. « Voalohany dia izaho ihany no nasaina nibata sy nanosika ny marary tamin’ny ‘brancard’. Rehefa tonga teo amin’ny mpitsabo indray, dia raha tokony novonjena avy hatrany ilay marary mafy, ny olona velona izay niaraka taminy indray no natao fanadihadiana tao amin’ny biraony » raha ny fanazavan’ilay olona nitaraina. Tao anatin’izay fotoana izay no maty ny narary izay nentiny. Entiny hilazàna ny filalaovana ain’olona eny anivon’ny hopitalim-bahoaka ny fizarany izany fitarainana izany. Ary tsy izy irery no mahatsapa izany.